IChiefs emizamweni yokusayina umdlali we-United ‘obiza itshe lemali’ | isiZulu
IChiefs emizamweni yokusayina umdlali we-United ‘obiza itshe lemali’
IKaizer Chiefs idedele abadlali abayisikhombisa
IKaizer Chiefs iqoke uMabedi njengomsizi kamqeqeshi
Cape Town – Izinkunzi zaseSoweto, iKaizer Chiefs, kubikwa ukuthi sezenze imizamo yothola umgadli weSuperSport United ovutha engabaselwe, uJeremy Brockie, yize noma kubikwa ukuthi aMatsatsatsa afuna itshe lemali kunoma yiliphi iqembu elimdingayo.
Lo mgadli odlalela iqembu lesizwe eNew Zealand uthathwa njengomunye wabadlali abababayo abadlala kwi-Absa Premiership ngemuva kokuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukuvalela amagoli cishe angaphezu kwelilodwa njalo emidlalweni emibili.
OLUNYE UDABA: IKaizer Chiefs idedele abadlali abayisikhombisa
Lo mdlali oneminyaka engu-29 ubudalala uke waba sematheni ngaphambilini, ngokufunwa kwakhe ngompetha base-Afrika, iMamelodi Sundowns, yize noma imali elinganiselwa ku-R12 million okuthiwa ukubiza kwakhe kuhlambiselwa kuyona, seyenze aba mfiliba amathuba okuthi kungase kube nesivumelwano esiphothulwayo ngaye.
ISoccer Laduma ibike ukuthi amaBrazilians yiwona angase abe sethubeni elingcono lokuthi asayine lo mdlali onenkontileka eyoze iphele ngonyaka ka-2020 neSuperSport.
Kodwa-ke Amakhosi nawo kubukeka sengathi angenile kulo mbango njengoba kubikwa ukuthi acele ulwazi ngesimo senkontileka yalo mdlali,
Ngokusho kwalo leli phephandaba, amaqembu ase-Middle East nawo asekhombise ukuba nentshisekelo yokusayina lo mdlali, yize noma zingekho iziphakamiso eziqinile ebezisenziwe kuze kube yimanje.
UBrockie usebe ngomunye wabadlali bakwamanye amazwe asebekhombise ukuvelela eMzansi njengoba esivalele enethini amagoli angu-38 lapha ekhaya kusukela afika ku-United ngesizini ka-2014/15.
Umqeqeshi uthi sebezifake engozini yokugawulwa yizembe
Umqeqeshi weGolden Arrows uClinton Larsen uthi ikilabhu yakhe izibeke esimeni esinzima njengoba isingasemsileni futhi sekusele imidlalo engu-9 iphothule isizini.
Kutholakale umfana, 9, elenga esihlahleni eThekwini
UNzimande uthi ukulungele ukubuyela kwiKhabinethi
Cpt: 17-24°C Pta: 18-25°C
Jhb: 16-22°C Bloem: 16-30°C
Dbn: 23-28°C PE: 18-22°C
Ashburton - 10:42:05 AM ROADWORKS - left lane closed after Market Road - EXPECT DELAYS Ezinye zasemigwaqeni